आजको तपाईको राशिफल,हेर्नुहोस - s3kentertainments3kentertainment
आजको तपाईको राशिफल,हेर्नुहोस
मेषः– समयमा गरेका काम सफल हुनेछन्,उचित लाभ हुनेछ । ढिला सुस्ति गर्दा जति फाइदा लिन सकिन्थ्यो त्यति हुने छैन । आफुले लिने फाइदा अरुले लिने छन् । पठन पाठनमा कमै ध्यान जानेछ । महत्वकाँक्षी योजना अगाडि बढाउदा विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट घाटा त हुने छैन तर नाफा कम हुनेछ ।
वृषः– समय अनुकुल देखिन्न । साना साना कुरामा हेलचक्र्याई नगर्नु होला । झुट्टा आरोप लगाउन सक्छन् सतर्क हुनुहोला । प्रतिष्ठा जोगाउनु होला । नयाँ क्षेत्रमा लगानी नबढाउनु होला । व्यापार व्यवसायबाट उचित लाभ लिन सकिने छैन । अरुको विश्वास धेरै नपर्नु होला । नोकरीमा समस्या आउन सक्छ । अतिथि सत्कारमा धन खर्च हुनेछ ।
मिथुनः– कार्य क्षेत्र छोडेर बाहिर नजानु होला,सम्भावनाका ढोका खुल्लै देखिन्छन् । समयमा कार्य सम्पादन गर्नु होला । ढिला गर्दा अवसर अरुले छोप्ने छन् । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । आम्दानीलाई वचतमा परिणत गर्न भने गाह्रो हुनेछ । अरुको कुराको धेरै विश्वास नगर्नु होला । ऋण लगानी नगर्नु होला ।
कर्कटः– सामान्यतया दिन अनुकुल नै देखिन्छ । कार्य तालिका बनाएर योजना अगाडि बढाउनु होला सफलताका सिढि चढ्न गाह्रो हुने छैन । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ । सहयोगी मित्र भेटिने छन् । साझेदारीमा काम नगर्नु होला । द्वन्दबाट टाढा बस्नु होला । गएका ठाँउमा स्वागत सत्कार मिल्नेछ ।
सिंहः– काममा पूर्ण सुधार होइन क्रमिक सुधार आउनेछ । समस्याको समाधानका उपायहरु पत्ता लाग्नेछ । उपकारी काममा समय बढि खर्च हुनेछ तर आफ्नो उपकार गर्ने कोहि हुनेछैन । घर छोडेर बाहिर जान मन लाग्नेछ । व्यवसाय परिर्वतनको चाहान बढ्नेछ । अध्ययन अध्यापन कार्य अगाडि बढ्ने छन् । वौद्धिक जगत सँग भेटघाट हुनेछ ।
कन्याः– समयले साथ दिने छैन । सपनाहरु विलाउने छन् । अनावस्यक विषयमा तनाव हुनेछ । संचित धनमा ह्रास आउनेछ खानपान नमिल्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । अविश्वासको वातावरण बन्नेछ । कामले पूर्ण गति लिने छैन । व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दि कायम रहनेछ । कार्य क्षमतामा ह्रास आउनेछ ।
तुलाः– समयको महत्व वुझेर काम गर्नु होला हेलचक्र्याई भयो भने पछि पश्चताप गर्नु बाहेक केहि हुनेछैन । समयमा गरेका काम सफल हुनेछन् । उपलब्धि पनि हात लाग्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । पारिवारिक सहयोगमा कुनै कमि आउने छैन । बाह्य व्यक्तिको भर परेर काम नगर्नु होला धोका हुनेछ ।
वृश्चिकः– काम गर्ने वातावरण विस्तारै तयार हुनेछ । संघर्ष विना सपना साकार हुने छैनन । आयात निर्यात व्यापार व्यवसायमा सुधारका संकेत देखिने छन् । ऋण मोचनको सम्भावना पनि देखिन्छ । पारिवारिक सहयोगमा वृद्धि हुनेछ । कार्य क्षमता बढ्नेछ । नयाँ योजनाको बारेमा विचार विमर्श हुनेछ । यात्राको योजना बन्नेछ ।
धनुः–सहज रुपमा काम गर्ने बातावरण अझै बन्ने छैन । साना साना समस्या समाधान गर्न पनि तयारी ठुलो गर्नु होला । उपलब्धि हासिल गर्न संघर्षका बाटाहरु रोज्नु पर्नेछ । लेनदेन कारोबारमा समस्या आउन सक्छ । सवैलाई आफ्नो ठानेर आत्मिय कुरा नखोल्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट सोचे जस्तो नाफा लिन सकिने छैन ।
मकरः– तपाई माथि भ्रम जाल बुनेर फाल्ने छन् विचार पु¥याउनु होला । सानो हेलचक्र्यार्ईले ठुलो घाटा हुनेछ । मिलेर काम गर्दा धोका हुनेछ । घरयासी खर्चमा कुनै कमि आउने छैन । जीवन साथीको सहयोग र सल्लाहामा काम गर्दा सामान्य राहत मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायमा विस्तारै सुधार आउनेछ । नेतृत्वको प्यास जाग्नेछ ।
कुम्भः– ग्रह,गोचर सामान्य अनुकुल देखिन्छ । समयमा गरेका काम सफल हुनेछन् । कर्म अनुसार व्यापार व्यवसायबाट फल मिल्नेछ । ढिला सुस्ति र हेलचक्र्याईले आफैलाई घाटा हुनेछ । लगनशिलता बढाउनु होला । अरुको धेरै विश्वास र भरोसा नगर्नु होला । बढि महत्वकाँक्षी नबनि काम गर्नु होला । धन दिदा विचार प¥याउनु होला ।
मिनः– कर्म क्षेत्र छोडेर बाहिर नजानु होला । काममा विस्तारै सुधार आउनेछ । आर्थिक समस्या कम भएर जानेछन् । व्यापारमा क्रमिक सुधार आउनेछ । कार्य लगनशिलता विस्तारै बढ्नेछ । बोलीको विश्वासमा मात्रै अगाडि बढ्नु भयो भने दुख पाउनु हुनेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा भूमिकाको खोजी हुनेछ । पढाई लेखाईमा भने कम ध्यान जानेछ ।
भगवान हामि सबैका साझा हुन्,भगवानले हामि सवैको रक्षा गरुन हेर्नुहोस! आजको तपाईको राशिफल
लाल कुमार बरालको संगीत एलिना चौहानको मनै छुने स्वरमा“नजाउ नभन”यसरि गरिन बिन्ति,हेर्नुहोस भिडियो
भगवानले हामि सबैको रक्षा गरुन ! हेर्नुहोस आजको तपाईको राशिफल